Music Khabar सहिमाको 'कुनै दिन...'मा दिपकको निर्देशनमा डेब्यु, ! हेर्नुहोस् भिडियो ! - Music Khabar
Home » Image slider » सहिमाको ‘कुनै दिन…’मा दिपकको निर्देशनमा डेब्यु, ! हेर्नुहोस् भिडियो !
सहिमाको ‘कुनै दिन…’मा दिपकको निर्देशनमा डेब्यु, ! हेर्नुहोस् भिडियो !
चैत्र २८, काठमाडौं । सुमधुर आवाजकी धनि चर्चित एवं लोकप्रिय गायिका सहिमा श्रेष्ठले ‘कुनै दिन’ बोलको गीतको नयाँ म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक गरेकी छिन् । सहिमाको सुमधुर आवाजमा रहेको उक्त गीतको म्युजिक भिडियो पनि निकै नै उत्कृष्ट बनेको छ ।
चैत्र २७ मा परेकोगायिका सहिमा श्रेष्ठको जन्मदिनको अबसरमा गीतको म्युजिक भिडियो सार्बजानिक गरिएको हो ।
आफुलाई छोटो समयमा नै चर्चाको शिखरमा पुर्याएर स्थापित हुनलाई सहयोग गर्ने सम्पूर्ण फ्यान फलोअर्स र शुभेच्छुप्रति आफु सदैव ऋणी रहेको र सदैव यस्तै मायाको अपेक्षा गरेको समेत सहिमाले बताइन्।